Mushrooms | December 2019
Jardiinka barafka ee jiilaalka guriga
Qeybta labaad ee xagaaga - waxaa la joogaa waqtiyo lagu buuxinayo kaydka jiilaalka. Waa waqtigii beergooyska, geedi socodka iyo ilaalinta khudaarta. Dukaanka cusub iyo midhaha jilicsan, marka laga reebo gasacadaha, waxaa loo diraa qaboojiyaha - ilaalinta wanaagsan ee fiitamiinada. Laakiin waxaa jira nooc kale oo banaan oo shaqeynaya oo badan oo dhaqdhaqaaqyo ah, kuwaas oo lagu keydiyo boqoshaada la uruuriyay ama la iibsaday jiilaalka, habkana waa in la tixgeliyaa si faahfaahsan.
Sida loo dhigo jiilaalka cad ee jiilaalka: cayriin, la kariyey, la shiilay
Mushahar barafaysan maanta ayaa laga iibsan karaa suuqa iyo dukaanka. Hase yeeshee, hudheelka guriga ayaa wali ku habboon. Dadku waxay door bidaan in ay beeri-beereed u noqdaan jiilaalka, maadaama ayan ahayn wax soo saarku aad u fudud oo aan cidina dammaanad qaadi karin in alaab tayo leh lagu iibsado dukaanka. Taasi waa sababta aan u go'aansanay inaan ka hadalno boqollayda barafka porcini xilliga jiilaalka iyo soo jeedinayaan cuntooyin badan oo caan ah.
Boqoshaada barafaysan: daawooyinka cunto kariska tallaabo tallaabo tallaabo leh
Miisaanka xoogga leh ee cufan ayaa caan ku ah goosashada xilliga jiilaalka. Qaab dhismeedkooda, oo aan la jilicsanayn qoyaanka, waxay awood u yeelan karaan qaabka ay xitaa ku qaboojiso qoto dheer. Si kastaba ha noqotee, ma aha martiqaad kasta oo aan ogeyn oo kaliya ma aha oo keliya boqoshaada cusub waa la marsiinayaa, laakiin sidoo kale kuwa wax ka qabtay hawlaha qaar. Waxyaabaha qarsoon ee saxda ah ee saxda ah ee khatarta ah, iyo sidoo kale kuwa ka soo gaaray habka kala duwan ee xaaladaha guryaha, waxaan ku sharrixi doonaa dib u eegista.
Ku xakamee champignon qaboojiyaha guriga: siyaabaha ugu fiican
Champignons - mid ka mid ah boqoshaada ugu caansan. Waxaa loo goyn karaa jiilaalka siyaabo kala duwan: pickle, pickle, qalalan. Hooyooyinka qaarkood waxay jecel yihiin inay qaboojiyaan. Waa mid aad u habboon, sababtoo ah boqoshaada waa had iyo jeer gacanta. Maalin kasta, waxaad jilicsan kartaa qayb ka mid ah waxaadna diyaarin kartaa weel qalajis ah. Isu diyaarinta boqoshaada Ka hor inta aan la qaboojinin boqoshaada barafeeyaha, waxay u baahan yihiin inay si habboon u diyaargaroobaan tan: Si loo qaboojiyo, kaliya boqoshaada ugu da'da yar, cad cad oo midab leh, oo ka baxsan qoyaan iyo dhibco, waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah.
Sidee loo kariyaa joodariga jiilaalka: Cunto fudud oo dhadhan fiican leh sawirro
Chanterelles waa boqoshaada la cuni karo qaybta labaad. Dabcan, iyagu maaha sidii dhadhan fiican oo nafaqo leh sida boqoshaada cad, laakiin dadka ka soo jeeda maantana waxay ixtiraamaan likaha badan, maadaama aanay ahayn duufaan iyo u dulqaadanayaan gaadiidka si fiican. Waa la kariyaa, la shiili karaa, la shiilay, la qaboojiyey, la qalajiyey, cusbayn iyo saliid. Waxaa jira cuntooyin kala duwan oo kala duwan oo loo yaqaan 'chanterelles', laakiin tixgelinta ikhtiyaariga ah ee boqoshaada la qaboojiyey jiilaalka.
Sida loo milixiyo boqoshaada ee guriga: cuntada ugu delicious
Taageerayaasha boqoshaada waxay rajeynayaan in ay bilaabmaan xilliga fasalka. Waqtigan xaadirka ah, dabeecadda ayaa ka farxineysa deeqsinimadeeda iyo kala duwanaanshaha. Booqashada boqoshaada keynta, waxaad ka heli kartaa boqoshaada porcini, chanterelles, boqoshaada caanaha iyo wakiillada kale ee boqortooyada. Laakiin mid ka mid ah kuwa ugu waxyeellada badan waa agarics malab. Mushahaan waa mid aad u caafimaad badan oo dhadhan fiican leh, iyo xilliga jiilaalka waxay si fiican u buuxin doontaa miisaska fasaxa.
Ma lagama maarmaan in la nadiifiyo saliidda iyo sida loo sameeyo si sax ah
Dad badan ayaa jecel boqoshaada qaadashada, sababtoo ah tani waa fursad weyn oo aan ahayn kaliya in lagu yareeyo buufiska, laakiin sidoo kale soo iibsashada dalag cajiib ah, oo aan marar badan laga arkin dukaanka cusub. Qofkasta wuu heli karaa musqul, laakiin si loo kala saaro inta la cuni karo iyo sunta ama si fiican loo nadiifin karo tijaabada la helay - tani waxay horay u baahan tahay khibrad.
Mushahaada Veselka - bogsashada guryaha iyo codsiga daawada
Tirada badan ee boqoshaada waxaa jira hal tijaabo oo aad u faa'iido badan - Veselka Common, taas, iyada oo muuqata muuqaalkiisa iyo hantidiisa, waxa uu ahaa dano gaar ah dadku in ka badan hal qarni. Aynu u fiirsano si dhow, u tixgelino sifooyinka bogsashada iyo isticmaalka daawada dhaqameed. Qeexida sifooyinka Botanical: Mushta Veselba mushkilad guud waa miis ka mid ah caanaha isla magaca.
Sida loo tolaa boqoshaada jiilaalka ee bangiyada: qandho fudud iyo delicious leh sawirro
Qiimaha alaabooyinka boqoshaada musqusha waxay ku dhexyihiin qaabka dhif ah ee isku dheelitiran ee qaybaha dabiiciga ah ee cuntooyinka: borotiinka, carbohydrates, dufanka, macdanta, fiitamiinada. Waxaa muddo dheer la rumaysan yahay in suxuunta boqoshaada ay badalaan hilibka xilliga qaboobaha. Ilaa bilowgii qarnigii 20aad, salting iyo qalajinta ayaa ahaa hababka ugu dhakhsaha badan oo aan qaali ahayn boqoshaada goynta loogu talagalay kaydinta muddada dheer.
Sida ay u egyihiin, meesha ay ku koraan, iyo haddii ay suurtagal tahay in la cuno khadadka dayrta
Faa'iidooyinka fangaska ee jirka bani'aadamka waa mid aan loo baahnayn, sida nafaqada, sababtoo ah maaha wax la yaab leh in mararka qaar loo yaqaan hilibka kaynta. Si kastaba ha noqotee, waa muhiim in la ogaado noocyada nooca ah ee la cuni karo, iyo in loola dhaqmo si taxadar leh. Maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah boqoshaada ugu caansan - khadka. Maqaalka waxaad ka baran doontaa sida loo ogaado khadka, meesha laga helo, waa wax halis ah ama faa'iido leh dadka iyo wax badan.
Cawska cagaaran: sharax, meesha koritaanka, sida loo kala saaro malab agaric been ah, farmaajo
Boqolleyda cawska, ama caleemaha, waxay ka mid yihiin boqoshaada ugu faa'iido badan, kuwaas oo si firfircoon loo isticmaalo ma aha oo kaliya in lagu karsado, laakiin sidoo kale daawada iyo qurxinta. Sida loo kala saaro agarics been ah, marka la ururiyo iyo sida loo karsado likaha kuwaas - tixgeliyaan in faahfaahin dheeraad ah ee maqaalka. Xaq u yeelashada Cawska qaxwada waxaa ku jira fasalka IV ee kala-soocidda edaynta - Musqulo dhif ah oo la soo ururiyey ujeeddo la qiyaasi karo oo aan ahayn dhadhan la sheegi karo.
Qaabdhismeedka boqoshaada musqusha (floats)
Dhulkeena, ballaaran ee boqoshaada ayaa sii kordhaya, laakiin dad yar ayaa si dhab ah u qaata. Tani waa arrin xasaasi ah, oo u baahan khibrad iyo aqoon gaar ah. Ka dib oo dhan, xitaa ku jira cayayaanka ecologically ahaan nadiif ah, waxaad arki kartaa "Mushaharro" likaha, taas oo u muuqata in ay la mid tahay in aan la mid ah, laakiin waqti isku mid ah ka soo.
Waa maxay boqoshaada koray ee Maajo
Bilaha guga ma aha mid dhaqameed u ah soo qaadashada, xitaa waqtigan in ka badan 60 nooc ayaa ku haboon isticmaalka aadanaha. Guga, boqoshaada waxay bilaabaan in ay isla markiiba soo muuqdaan ka dib marka barafku dhalaalaan, qaarkood waxay u koraan si gaar ah ilaa xagaaga, halka kuwo kalena ay sii wadaan inay ku raaxaystaan ​​beeraha xitaa bilawga xilliga dayrta. Ku saabsan noocyada boqoshaada laga soo qaadi karo bisha Maajo, aynu ka sii hadalno.
Sidee loo marin karaa iyo boqollada caano ee faa'iido leh
Salting waxaa loo tixgeliyaa habka caadiga ah ee loo sameeyo boqoshaada caanaha. Laga soo bilaabo waqtigeedii, boqoshaada cusbayn cusbeyntu waxay ahaayeen kuwo aad u fiican ee suxuunta baradhada iyo maraqa. Laakiin dhawaanahan, qaabka lakala qaado boqoshaada ayaa sii kordhaya. Boqoshaada caanaha leh ee la miiray ma aha oo kaliya cufan, laakiin sidoo kale ammaan, maadaama ay si fiican u shaqeynayaan inta lagu jiro habka karinta.
Mushroom ryadovka: sharaxaad, meelaha koritaanka, mataanaha, cunto karinta
Mushrooms waxaa jecel dad badan, laakiin qof kastaa ma awoodo in uu kala saaro sunta laga soo qaado. Sababta oo ah jahwareer, noocyo badan oo ka mid ah tijaabooyinka la cuni karo iyo kuwa waxtar leh ayaa la soo celiyaa dadka wax soo goynaya. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa nooca aan la garanayn ee waxsoosaarka kaynta - shaashadda baaritaanka. Xaq u yeelashada Qoysku wuxuu ka kooban yahay boqoshaada la cuni karo iyo sunta.
Tilmaamaha beeraha ee khibrada guriga, hababka
Boqortooyada oo dhan, boqoshaada qosolka ah ma aha oo kaliya dhadhanka fiican iyo koritaanka degdegga ah, laakiin sidoo kale ay ku haboon tahay beerashada macmalka. Waxaa intaa dheer, hannaankani waa mid la heli karo oo xiiso leh in xitaa carruurta ay ku hawlan karaan wax soo saarka. Sida loo abaabulo beerta boqoshaada oo si joogta ah u hesho waxsoosaarka deeqsinimada leh - waxaan si dheeraad ah u sheegi doonaa.
Daboolka Fungus Fungus
Guga dabiiciga ah waxaad horay u heli kartaa boqoshaada ugu horeysay. Xayawaanka qallafsan ee leh culeyska maskaxda ka dib roobab guga ka dib waxaa jira koofiyado caqli-gal ah (xargaha, cirbadaha jilicsan). Waxay si deg deg ah u baaba'ayaan, mar walbana suurtagal ma ahan inay qabtaan. Morel kalluunka waxaa iska leh qoyska Morelka waxayna u egtahay dabeecada, iyo koofiyadu waxay leedahay qaab dawan, oo la mid ah koofiyad, oo lagu xidho lugta dheer ee fungus.
Maxuu xajiinka galley u eg yahay oo uu macquul yahay inuu cuno
Dadka aan jilicsaneyn iyo kuwa soo-saarka ah ee jilicsan, sababtoo ah jaahilnimadooda, mararka qaarkood naftooda ayay halis galiyaan inay uruuriyaan boqoshaada aan la dabooli karin ama sunta leh - Boqortooyada Musqulaha waxaa jira tiro badan oo tijaabo ah oo u eg kuwo la mid ah noocyada la cuni karo, laakiin dhab ahaantii waa sun. Sida loo kala saaro fangas cad oo been ah oo la cuni karo, maxay yihiin calaamadaha lagu sumoobo geed qadhaadh, meeshii ay koraan, iyo waxa ay u egtahay - in badan oo maqaal ah.
Mushta roobka: Waxyaabaha la cuni karo ama Maya
Roobka dushooda ka dib, cawska iyo cagaarka waxaa ku yaal boqoshaada wareegsan ama roodhida ah - roobab. Shaybaarka la kobciyay waxay leeyihiin budo budo ah oo ku dhex jira boodh, oo ka soo baxa boodhka, oo ka soo baxa jirka jilciya haddii la taabto. Sababtaan awgeed, roobabku waxay leeyihiin magacyo kale: boodboodka, boodhka, sigaarka tubaakada iyo kuwa kale.
Sida loo eego, meesha ay ku koraan iyo sida loo cuno astaamaha la cuni karo
Cuntada bani-aadmadu waxay ku jirtaa cuntada iyo xayawaanka xoolaha. Waxa kale oo jira noolo aan ku dhicin mid ka mid ah qaybaha. Kuwani waa boqoshaada. Waxay ku go'doomeen boqortooyo kala duwan waxayna u qaybsamaan cunnooyinka iyo sunta. Waxaa jira qayb kala duwan oo ah boqoshaada - sida caadiga ah la cuni karo. Maacuunta musqusha ee aan khibrada lahayn waa la mamnuucay in ay soo ururiyaan oo ay cunaan, maadaama ay jirto khatar sare oo ah sumoobid by wakiil aan la dabooli karin.
Khudaarta, khudaarta iyo ubbooyinku